Wasiirka Waraabka Suldaan Khayre: Qorshaha Shantan Sano Ee Soo Socota Waxaan Laba Jibaaraynaa Guulihii Laga Gaadhay Wareegii Koobaad Ee GTP-1. - Cakaara News
Wasiirka Waraabka Suldaan Khayre: Qorshaha Shantan Sano Ee Soo Socota Waxaan Laba Jibaaraynaa Guulihii Laga Gaadhay Wareegii Koobaad Ee GTP-1.
Jigjiga(CN) Axad.July.12.2015, Waziirka Waraabka iyo Horumarinta Dooxooyinka DDSI mudane Suldaan Maxamed Xasan (Khayre) oo ah xildhibaan kasoo baxa degmada caanka ku ah khayraadka beeraha ee Beercaano ee gobolka Shabeele ayaa shantii sano ee lasoo dhaafay xilal kala duwan kasoo qabtay deegaanka kuwaas oo u badnaa Moyornimada Maamulada magaalooyinka waawayn ee Jigjiga iyo Dhagaxbuur oo uu isbadal balaadhan kakeenay.
Xildhibaan Suldaan Khayre ayaa dhamaadkii bishii December ee sanadii 2014 loo magacaabay wasiirka Waraabka iyo Horumarinta Dooxooyinka DDSI, wuxuuna wasiirku sidoo kale guulo wax ku'ool ah kasoo hoyiyay shaqooyinkii xafiiska ee dhinacyada mashaariicda iyo dib u dajinta Waraabka iyo Horumarinta Dooxooyinka ee DDSI.
Hadaba wasiirka ayaa wakhtigan oo ku beegan bilowga wareegii labaad ee GTP-2 waxaa uu shabakada CakaaraNews u sheegay in shantii sano ee lasoo dhaafay deegaanka guulo waawayn lagasoo hoyiyay horumarka, nabadgaliyada, xidhiidhka dadwaynaha iyo maamulka suuban islamarkaana lagu guulaystay qorshihii koobaad ee isbadalka iyo koboca dhaqaalaha dalka. Wuxuuna wasiirku carabka ku dhuftay in si fiican loogu guulaystay qorshayaashii MDG ee wadooyinka, buundooyinka, iyo dib u dajinta.
Wasiirka ayaa kawaramay dhinaca Waraabka iyo Horumarinta Dooxooyinka shantii sano ee lasoo dhaafay qorshayaashii MDG ee dib u dajinta iyo mashaariicaha in aad loogu diirsaday islamarkaana ay shacabku ka faaidaysanayaan gaar ahaan gobolada uu sida gaarka ah uga socdo barnaamijka dib u dajinta.
Mar ay CakaaraNews wax kawaydiisay wasiirka waxqabadkii u danbeeyay ee dhinaca waraabka iyo horumarinta dooxooyinka ayuu wasiirku shegay in aad looga faaiidaystay dib u dajinta iyo mashaariicaha kale ee caafimaadka, waxbarashada, xarumaha xanaanada iyo biyahaba. Sanadkii u danbeeyay waxaa ladajiyay 17,122 qoys, iyadoo shantii sano ee u danbaysayna ladajiyay 175,353 qoys oo ah 120 qabalee oo kakooban 23 degmooyin oo kamid ah gobolada dib u dajinta ayuu yidhi wasiirku.
Dhanka kale waxaa uu xildhibaan Suldaan Khayre ku nuux nuuxsaday in shantan sano uu deegaanku bar tilmaameedsanayo horumarka xawliga ah ee dalku kaga mid noqonayo wadamada dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay, iyadoo shantii sano ee udanbaysay dalku ahaa wadamada ugu horeeya Afrika ee dhaqaalahoodu sida xawliga ah u korayo. Sidoo kale waxaa uu wasiirku carabka ku dhuftay in GTP-2 barnaamijka horumarineed ee dib u dajinta laga hirgalinayo gobolo kale oo cusub oo ay kamidyihiin Faafan iyo Jarar.
Wasiirku waxaa uu intaas kudaray in deegaanku talaabsaday, xukuumada iyo shacabkeeduna ay gaadheen bisayl siyaasadeed, horumarineed oo aan soo noqosho lahayn, taasoo DDSI kadhigaysa shantan sano ee soo socota hormuudka Itoobiyada Cusub.
Iskusoo wada duuboo, guud ahaanba xukuumada DDSI ayaa u muuqata shantan sano dar dar xoogan oo karaar galinaysa isbadalka lagaadhay kadib markii kalsooni buuxda uu shacabka DDSI kusiiyay doorashadii May ee sanadkan xisbiyada haatan talada dalka iyo deegaanka haya ee EPRDF iyo ESPDP oo horseeday isbadalka maanta.